Inhlangano yethu samanje kuwe Portal creative futhi olusha 2 Steam Free Key Generator Tool ....
Thola Ngisho PC /-Windows scary FPS Bhalobhasha, Ukuhlanganisa imiphumela izindaba ezimbili exhumene ngentuthuko entsha computer innovation. Lo mdlalo yasungulwa ngo-studio Polish Farm 51, okuqondwayo action adventure video game Deadfall Adventures, Bhalobhasha NecroVision kanye ukufakwa sokugcina ochungechungeni Painkiller. Amalungu we studio nabo baye basebenza on hits njenge Witcher futhi Two Worlds II.
Lo mdlalo video utshela indaba yendoda egama layo lingu-Black, umsebenzi kabani ukuze afihle info eziningi futhi amaqiniso enzima ekufuneni ohulumeni izibalo bomhlaba abavelele abangu. In Ukuqonda kwakhe akuphenyeki, iqiniso kuphela ncamashi lokho okwenzayo ukuze embule noma ngibufihlele ngabanye. Ngokudabukisayo, Ngokuvamile ngempela kukhona ezingenacala umsebenzi wakhe. Kuze kube manje noma yini yahamba ngokushelela. Nokho, izimo kuba eziyinkimbinkimbi lapho ezisulwini Black sika abazoba enquma ukuba ulwe emuva.
Thola Ngisho PC / Windows ikhiqiza ezintsha futhi Mayelana technical ongakhetha esetshenziswa. Isihloko is powered by isizukulwane entsha Engine ngiyaphupha, however ihluzo video game zisekelwe phezu okuskeniwe izindawo kwangempela kanye nezinhlamvu 3D. Ubuchwepheshe yasungulwa studio ngokubambisana nezinhlangano ucwaningo kanye ongoti zangaphandle, futhi ekuqaleni isikhathi it ukusebenza isiqophi imidlalo in obungaka. It kuholela ihluzo photorealistic ngempela, ezilinganiselwe kusukela engxoxweni yokuqala kakhulu isihloko.